Pokémon Go inoramba yakasimba muApp Store kunyangwe iko kudonha kwevashandisi | IPhone nhau
Pokémon Go inoramba yakasimba paApp Store kunyangwe iko kudonha kwevashandisi
Kunyorera kwaNiantic kunoenderana neyakawedzera chokwadi system inoenderera nekukohwa nhau dzakanaka. Nekudaro, isu nguva pfupi yadarika takagamuchira ruzivo nezve mukana wekuti vashandisi vePokémon GO vanga vadzikira kusvika pa80% zvichienzaniswa nekutanga. Nekudaro, zvinoita sekunge Pokémon Go ichiri kuenda yakasimba paUS iOS App Store, kuva chikumbiro chechitatu nemazuva akateedzana, chave chiri pakati pezvikumbiro zvakaunza mari zhinji. Uye ndezvekuti hapana vashoma vashandisi vanosarudza kuisa mari yakawanda uye shoma nguva mukutora kweyavanofarira Pokémon.
Pakarepo mushure meCandy Crush Saga iyo yasara mazuva gumi neshanu pamusoro pechinyorwa ichi, uye vese vari vaviri kubva kuClash of Clans, inosara yemazuva makumi matatu nematanhatu mutungamiri. Kushanda kwaNiantic kwakapetwa uye nekuwedzera muteveri wayo, DragonVale, uye inosara kwemazuva makumi manomwe nemana mune urwu runyorwa pamusoro-kuwana maapplication pane iOS App Store muUnited States of America Zvichida kuti nekuuya kwePokémon Go Plus idzi mari dzinowanda, zvisinei iyo gadget yekudyidzana iyi yekushandisa yakatengeswa kunze kwezvitoro zvese, ichitambura kushomeka kwemasheya akafanana neiyo iPhone 7 Plus.
Iyo yekupedzisira yekuvandudza Pokémon Go yakatiunzira mukana wekuti ubatanidze «shamwari»Pakufamba kwedu, imwe nzira iri nyore yekutora zviwitsi. Nekudaro, mutambo uchine zvakawanda zvekuvandudza, kure nekumisidzana pakati pevashandisi uye nekuchinjana kwePokémon. Nekudaro, pamwe mweya wekufema uchauya nechikumbiro cheApple Watch, iyo inogona kupa zvakanyanya kudiwa kwePokémon Plus, kufamba kusinganzwisisike, asi izvo zvinowedzera kusimbisa chibvumirano pakati peApple neNintendo. Isu tinorangarira kuti mhedzisiro yeiyi pacts isu tichaona muna Zvita Super Mario Mhanya chete kune iyo iOS App Store.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Pokémon Go inoramba yakasimba paApp Store kunyangwe iko kudonha kwevashandisi
Iyo inonakidza khalendari application inovandudzwa kutora mukana wenhau dzeIOS 10 uye watchOS 3
Unonetsekana nezve yako inopenya nhema nhema iPhone 7 ichikweshwa? Iyi Spigen kesi yakakunakira iwe